स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: August 2012
स्तनपान सप्ताह विशेष
विगत १९ वर्षदेखि स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट महिनाको पहिलो सप्ताहलाई स्तनपान सप्ताहको रुपमा मनाइने गरिएको छ। यसपालीको सप्ताहको नारा 'विगतलाई बुझौं, भविष्यको लागि योजना बनाऔं' भन्ने छ। यसै अवसरमा स्तनपानका विषयमा केही महत्वपूर्ण जानकारीहरु यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु। यी जानकारीहरु नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको जानकारी पुस्तिकाबाट लिइएका हुन्।
आमाको दूध शिशुहरुका लागि एकमात्र सर्वोत्तम खाना हो।
आमाको दूधको महत्व
आमाको दूध जन्मेदेखि ६ महिनासम्मका शिशुहरुको शारिरीक एवं मानसिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तत्वहरुले भरिपूर्ण हुन्छ। तसर्थ ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध बाहेक अन्य कुनै पनि चिजहरु खुवाउनु पर्दैन।
आमाको दूध सधैं तयारी अवस्थामा पाइन्छ। शिशुले चाहेको बेलामा जहिले पनि जहाँ पनि खुवाउन सकिन्छ।
आमाको दूध शिशुका लागि पहिलो खोप हो। यसमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक तत्व हुन्छ।
शिशु जन्मेपछि केही दिनसम्म आउने बाक्लो पहेंलो दूध 'बिगौती'मा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक तत्वहरु रहेको हुन्छ जसले हानिकारक र संक्रात्मक जीवाणु र किटाणुलाई नष्ट पारी शिशुलाई संक्रात्मक रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ। आमाको दूध खान पाएका शिशुहरु झाडापखाला, श्वासप्रश्वास र अन्य रोग लाग्नबाट सुरक्षत रहने भएका कारण शिशु मृत्युदरमा २५% ले कमी आएको पनि पाइएको छ।
स्तनपान गराउने आमाहरुको स्तन र पाठेघरमा क्यान्सर हुने सम्भावना पनि धेरै कम हुन्छ।
जन्मान्तर कायम राख्न स्तनपानले सहयोग पुर्याउँछ।
शिशुलाई अन्य महंगा आकर्षक बट्टाका लिटो, पाउडर दूधहरु खुवाउनुभन्दा स्तनपान गराउँदा घरको आर्थिक भार पनि घट्छ।
स्तनपान गर्न नपाएका शिशुहरु पछि गएर झगडालु स्वभावका हुने, अरुसँग घुलमिल गर्न नसक्ने र अपराधिक कार्यहरुमा लाग्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
शिशुलाई आमाको दूध पुगेको छ छैन कसरी थाहा पाउने?
क) शिशुको तौल बढे नबढेको हेरेर
प्रत्येक महिना शिशुको तौल कमसेकम ५०० ग्राम आधा किलो बढेको हुनुपर्छ। यदि शिशुको तौल एक महिनामा कम्तिमा पनि आधा किलो बढेको छैन भने शिशुले पर्याप्त मात्रामा आमाको दूध खान पाएको छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। तर यसका लागि नियमितरुपमा तौल लिनुपर्ने हुन्छ। यदि नियमित तौल लिन सम्भव छैन भने सामान्य वृद्धि अनुगमन अवलोकनबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै: तौल लिन सम्भव नभएका र लिन नजान्ने आमा वा अभिभावकले शिशुको हातमा र कम्मरमा नाडीमा कालो वा पहेंलो डोरा बाँधेर उसको वृद्धि भए नभएको हेर्ने चलन अझै गाँउघरमा छ।
ख) शिशुले २४ घण्टामा कति पटक पिसाब फेर्दछ त्यो हेरेर
दूध पुगेनपुगेको थाहा पाउने अर्को माध्यम पिसाब हो। दूध पर्याप्त मात्रामा पुगेको शिशुले एक दिनमा (२४ घण्टामा) कमसेकम ६ देखि ८ पटकसम्म पिसाब फेर्दछ र पिसाबको रंग सफा हुन्छ। तर यदि २४ घण्टामा ६ पटकभन्दा कम पिसाब फेर्छ र पिसाबको रंग गाढा पहेंलो बाक्लो, एकदम गन्हाउने छ भने त्यो शिशुलाई आमाको दूध पुगेको छैन भनेर थाहा पाउनुपर्छ।
आमाको दूध उत्पादनमा असर पार्ने कुराहरु के के हुन्?
महिलाहरुको दूध उत्पादन गर्ने क्षमता प्रकृतिले दिएको वरदान हो र यसमा सबै आमाहरुले गौरव र विश्वास गर्नुपर्छ। धेरैजसो आमाहरुले आफ्नो शिशुलाई पुग्दो मात्रामा दूध आउँदैन कि भन्ने पीर गरेको पाइन्छ। तर प्राय: सबै महिलाहरुले आफ्नो शिशुलाई चाहिने मात्रामा दूध उत्पादन गर्न सक्छन्। एउटा शिशुलाई मात्र होइन कि जुम्ल्याहा बच्चा जन्मदा पनि दुवैलाई खुवाउन पुग्ने गरी दूध उत्पादन गर्न आमाहरु सक्षम हुन्छन्। तर दूध चुसाउँदा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ।
चुसाउने तरिका पोजिसन ठिक हुनुपर्छ।
दूध चुसाउँदा निख्रने गरेर चुसाउनुपर्छ।
एउटा स्तनमा दूध निख्रेर पनि शिशु अघाएन भने मात्र अर्को स्तन चुसाउन पर्छ।
अर्को पटक खुवाउदा पहिला नखुवाएको स्तन चुसाउनुपर्छ।
एउटै स्तनबाट पनि शुरुमा अलि पातलो पानीको मात्रा बढि भएको दूध आउँछ जसले शिशुको प्यास मेटाउने गर्छ र केही समय चुसेपछि दूध केही बाक्लो भएर आउँछ जसमा पौष्टिक तत्वको मात्रा बढि हुन्छ र त्यसले शिशुको भोक मेटाउने र आवश्यक क्यालोरी दिने काम गर्छ।
धेरैजसॊ दूध खुवाउने आमाहरुले दूध नआएको गुनासो गर्ने गर्छन्। प्रशस्त मात्रामा दूध नआउनाका धेरै कारणहरु हुन सक्छन्। जस्तै: स्तनपान गराउँदा आफू बसेको आसन पोजिसन ठीक नहुनु, शिशुलाई स्तन चुसाउने तरिका नमिल्नु, पटकपटक र ठीक समयमा स्तनपान नगराउनु र आफ्नो दूध शिशुलाई प्रशस्त पुग्छ भन्ने आमाबुवालाई थाहा नहुनु वा आत्मविश्वासको कमी हुनु।
आफ्नो शिशुलाई चाहिदो मात्रामा स्तनपान गराउन सक्दिन भन्ने मानसिकता एवं गलत धारणाले गर्दा नै धेरैजसो आमाहरुले स्तनपान गराउन छोडेर अन्य खाना वा दूध खुवाउन थाल्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने जतिसुकै दुब्ली पातली भएपनि प्राय: सबै आमाहरु ज्यादै जटिल रोग लागेको अवस्था बाहेकमा आफ्नो शिशुको आवश्यकता अनुसार दूध उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ।
शिशुलाई कसरी स्तनपान गराउनुपर्छ?
स्तनपान गराउने आमा तनावरहित भई आरामसँग बसेकी हुनुपर्छ।
शिशुको शरीर आमासँग टाँसिएको र मुख स्तनतर्फ पारेर राखेको हुनुपर्छ।
शिशुको टाउको र शरीर सीधा हुनुपर्छ।
शिशुको चिउँडोले आमाको स्तनलाई छोएको हुनुपर्छ।
आमाको दुवै हातले शिशुको पिठ्युँमा राम्रोसँग समातेको हुनुपर्छ।
माथिका २ चित्रमा ठीक र बेठिक तरिकाले दुध चुसाइएको छ। तपाईंहरुले फरक थाहा पाउनुभयो?
दूध खुवाउँदा आईपर्नसक्ने समस्याहरुको रोकथाम:
बारम्बार दूध चुसाएन भने दूध गानिएर थुनिलो हुनसक्छ त्यसैले शिशुलाई बारम्बार दूध चुसाइरहनुपर्छ। चुसेर ननिख्रिएमा हातले निचोरेर निखार्नुपर्छ।
स्तनमा कडापन भएमा न्यानो वा तातो कपडाले सेक्नुपर्छ।
दूध गानिएर घाउ भएमा वा मुण्टो चिरिएमा उपचार गर्नुपर्छ। साथै शिशुलाई सफा कचौरामा दूध निचोरेर चम्चाले खुवाइनै रहनुपर्छ।
घाउ भएको मुण्टाको स्याहार कसरी गर्ने?
दूध चुसाउनु अघि र दूध चुसाइसकेपछि मुण्टामा खाने तेल लगाउन सकिन्छ।
मुण्टामा स्पिरिट, टिन्चर बेन्जिन, आयोडिन जस्ता कुराहरु कहिल्यै पनि लगाउनु हुदैंन।
शिशुको जिब्रोमा खटिरा आएको छ र आमाको स्तनको मुण्टो पनि दुखेको छ भने पहिले शिशुको जिब्राको उपचार गर्नुपर्छ। स्तनको मुण्टो निको नहुन्जेलसम्म दुध निचोरेर खुवाउनुपर्छ। यदि स्तनको मुण्टो ठिक नभएमा मुण्टोको उपचार गर्नुपर्छ।
सफल स्तनपानका आधारहरु के के हुन्?
शिशुलाई अघाउन्जेल स्तनपान गराउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आमामा हुनुपर्छ।
दूध चुसाउँदा ठिक तरिकाले शिशुलाई काखमा राखेको हुनुपर्छ।
शिशुलाई जतिसक्यो धेरै पटक र मागेको समयमा चाहेजति दूध चुसाउनुपर्छ।
बच्चाले खान मागेमा वा चाहेमा यात्रा, बाटो, मोटर वा रेलमा समेत दूध खुवाउन सकिन्छ र हुन्छ।
स्तनपानलाई बढावा दिन घरपरिवारबाट पूरा सहयोग हुनुपर्छ।
स्तनपान सम्बन्धी थप केही उपयोगी जानकारी:
शिशु जन्मेपछि जतिसक्यो चाँडो १ घण्टाभित्रैमा आमाको दूध चुसाउनुपर्छ।
जन्मेको ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्छ।
शिशु ६ महिना पूरा भएपछि आमाको दूधले अघाएपनि उसलाई चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व पुग्दैन। त्यसैले थप खाना खुवाउन शुरु गर्नुपर्छ।
दूध खुवाउने आमाले अरु बेलाको भन्दा एक आहार छाक बढी खाना खानुपर्छ।
बढी मात्रामा दूध उत्पादन गर्न सुत्केरीले झोल पदार्थ विशेषगरी ज्वानोको झोल, टुसा उमारेको गेडागुडीको रस जस्ता कुराहरु प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ।
शिशुलाई बारम्बार दूध चुसाइरहनाले दूध उत्पादनको मात्रा बढ्ने गर्छ। र दूध कम आयो वा बच्चालाई दूध पुगेन भनेर जति चुसाउन कम गर्यो त्यति नै दूध पनि कम बन्दै जान्छ।
सुत्केरी भएको बेलामा श्रीमान, सासू र घरका अन्य सदस्यहरुले सुत्केरीलाई विशेष सहयोग र हेरविचार गर्ने र थप खाना खान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
कुनैकुनै समुदायमा बच्चा जन्मनासाथ आमालाई मासु भात र झोलिलो पदार्थहरु प्रशस्त मात्रामा खान दिने चलन छ। यो अति राम्रो चलन हो। यस्तो चलनलाई प्रोत्साहित गरी नियमित गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ।
बच्चा जन्माउदा आमाको धेरै शक्ति खेर गएको हुन्छ। खेर गएको शक्ति फिर्ता ल्याउन आमालाई प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ र तागतिला खाना खान दिनुपर्छ जसले आमा फूर्तिली हुन्छिन् र स्तनपान गराउन सक्षम पनि हुन्छिन्।
बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्रै स्तनपान शुरु गराई ६ महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउन आमालाई सबैले प्रोत्साहन र सहयोग गरौं।
नोट: यस ब्लगका तस्बिरहरु स्तनपान सप्ताहको पहिलो दिन अगस्ट १ मा टिचिङ अस्पताल, महाराजगन्जमा आयोजित कार्यक्रमबाट लिइएका हुन्। उक्त कार्यक्रमका अन्य केही तस्बिरहरु:
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 2:24 PM3comments